Camera Recovery Memory Card - Ladnaansho tirtiray photos / sawiro
2 siyaabo inuu ka soo kabsado files ka Camera Memory Card oo keliya daqiiqado yar
Kamaradaha Maanta waa dhijital muuqaal iyo dadka u isticmaalaan in ay qabsadaan ay daqiiqado gaar ah oo cajiib ah. Inta badan mulkiilayaasha camera samayn aan gurmad sawirada sidaasay halis badiyay sawiro ay qaali ah. User inta badan argagixin, sawirada marka ka maqan kaadhka xusuusta. Nasiib wanaag, sawiro aad wali waa la soo saari karaa haddii hab sax ah loo isticmaalo.
Xaaladaha keeni kara in ay lumiyaan xogta ku saabsan kaadhka xusuusta camera
Waad waayi kartaa xogta ama sawiro in aad kaadhka xusuusta camera ay sabab u tahay xaaladaha soo socda:
Card musuqmaasuqa xusuusta ay sabab u tahay ka saarida kadis ah ka camera ama nidaamka halka akhriyo ama loo qoro habka ka socdaan
Formatting aan ulakaca ah kaarka aan gurmad sax ah oo ku saabsan nidaamka Windows.
Furin Xaasidnimo duuleen camera ah oo sabab u ah waa xiran habka cudurka
Goynta ka kaca ah awood ama nidaam xidho marka xogta laga kaadhka xusuusta in PC ama qalab kale oo lagu kaydiyo.
Nidaamka musuq file in kaadhka xusuusta, tirtirka shil ah ee xog muhiim ah, doorashada tirtirto doorasho oo dhan xaqiiqo ah asagaa iska saari doona xog ku saabsan kaadhka xusuusta.
The software kabashada xogta ugu wanaagsan ee kaadhka xusuusta camera
Wondershare Photo Recovery (ama Photo Recovery for Mac ) waxaa loogu talagalay xirfad software kaa caawin doontaa in aad dib u hesho sawiro lumay. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa inuu ka soo kabsado Cajalado, videos, archives iyo emails qalab digital sida USB drive, drive adag, camera digital iyo qalab kale oo ka saari karo.
Idinkuna ma waxaad u baahan tahay xirfado wax xirfad ah in la isticmaalo software tan waxa ay leedahay kaliya seddex talaabooyin fudud. Software Tani waa fududahay in la isticmaalo, dabacsan iyo soo kabashada xogta waa degdeg ah.
Wixii ammaan ah oo wax ku ool ah software kabashada xogta, isku day Wondershare Photo Recovery. Ha u hesho adiga kuu gaar ah version hadda iyo aad u isticmaali inuu ka soo kabsado aad sawiro maqan.
Sida loo soo ceshano sawiro ka kaarka xasuusta kharribeen isticmaalaya Wondershare Photo Recovery
Wondershare Photo Recovery isticmaalaan saddex tallaabo oo fudud inuu ka soo kabsado xogta lumay.
Tallaabada 1 Connect kaarka
First xirmaan xusuusta ku hallaysay kartaa drive USB ama akhristaha card in kombiyuutarka. Hubi in kaarka si fiican ugu xiran in ay oggolaadaan in ay fududaato in dib u soo kabashada. Marka PC helo kaarka, waxaad arki doontaa liiska qoruhu ka drive iyo warbaahinta kale lagu kaydiyo. Markaas riix Start badhanka si ay awood habka iskaanka ay ku maamulaan.
Waxaa jira afar hababka soo kabashada iyo nooca habka soo xulay hakin doonaan xaddiga waqtiga la qaaday hanaanka soo kabashada.
Tallaabada 2 Dooro goob iyo awood scan
Halkan waxaa looga baahan yahay in aad u dooratid goobta hore ee sawiradaada. Dooro kaadhka xusuusta tan iyo markii laga badiyay aad sawiro aad lumeen iyada oo kaadhka xusuusta kharribeen. Riix Scan sanduuqa si ay awood iskaanka in ay sii wadaan.
Xasuuso, in aad yara karaa ama joojin karaa habka iskaanka inkastoo waxaa lagu talinayaa in ay oggolaadaan in iskaanka xogta si ay u dhamaystiraan si loo horumariyo hanaanka soo kabashada. Waxaa jira File filter doorasho si lagaaga caawiyo in aad raadiso faylasha qaar si dhakhso ah.
Tallaabada 3 Ladnaansho aad sawiro lumay
Natiijada Scanning lagu soo bandhigi doonaa shaashadda ka dib markii iskaanka waa dhameystiran yahay. Guudmar sawirada ka natiijada scan dooro sawirada aad jeceshihiin inaad la soo kabsaday. Si loo sahlo in aqoonsiga, natiijada scan waxaa lagu soo bandhigaa All qaabab file ay. The files soo kabsaday lagu tilmaami karo marka la eego inta uu le'eg yahay, magaca, taariikhda badalo ama abuuray. Waxaa intaa dheer, waxaad badbaadin kartaa natiijada baaritaan lagu jiro soo kabashada sawir aan baahida loo qabo in rescanning.
Ugu dambeyntii, guji badhanka Ladnaansho si ay awood hanaanka soo kabashada sawir si ay u bilaabaan.
Ammaanka sawirro aad ka soo kabsaday iyo faylasha kale, HA iyaga ku badbaadin kaadhka xusuusta kharribeen. Waxaad iyaga ku badbaadin kartaa in qalabka kale ee dibadda ama kombiyuutarka.
Sidee inuu ka soo kabsado sawiro ka kaadhka xusuusta camera la Wondershare Data Recovery
Si aad u soo kabsado aad sawiro lumay, waxaad u baahan tahay xusuusta camera qalab kabashada card awood badan. Ma jiro qalab kale oo xoog leh tayana badan Wondershare Data Recovery (ama Data Recovery for Mac ). Download software Wondershare Data Recovery ee ku aadan ikhtiyaarka Mac oo ku xidh dib u soo ceshano aad sawiro xusuus leh.
Tallaabooyinka hoos ku hanuunin doonaa in aad ka bogsato sawiro aad ka kaadhka xusuusta Camera.
Tallaabada 1 Connect kaadhka xusuusta camera
Ka dib markii ay si guul ah ku rakibidda barnaamijka, ordo software ah. Barnaamij daaqadaha qalab lagu soo bandhigi doonaa shaashadda. Connect aad camera digital via cable USB ama akhristaha card si Mac. Hubi in kaarka si fiican u xiran sida in la aqoonsan yahay oo qayb ka ah Mac
Tallaabada 2 Start iskaanka
Halkan, afar hababka soo kabashada lagu soo bandhigi doonaa daaqadaha laga bilaabo of software soo kabashada. Dooro Khasaariyey Data Recovery soco in ay doortaan aad kaadhka xusuusta camera sida meesha uu u soo kabsaday sawiro laga badiyay. Markaasuu ku biiro qaybta sare oo ka mid ah daaqadaha, ku dhacay on box Scan si ay u bilaabaan dib u soo kabashada ee sawiradaada.
Talaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan aad sawiro lumay
Ka dib markii iskaanka waa dhameystiran yahay, tiro ka mid ah faylasha lagu soo bandhigi doonaa shaashadda. Dhex mara photos soo bandhigay by natiijada iskaanka iyo dooro kuwa aad rabto in la soo celiyo. Soco inay ku dhuftay Ladnaansho button dooro meesha aad Mac si uu u badbaadiyo sawirrada ka soo kabsaday.
Marka sawiro aad wali la la'yahay, ku noqo Tallaabada 2 dooro sahlo Deep Scan. Wondershare Data Recovery Waa software kabashada wax ku ool ah oo aan aad u seegi doona inuu dib u helo sawiro aad.
Waa kuwee file noocyada sameeya taageero Wondershare Data Recovery?
Wondershare Data Recovery Software taageeraa in ka badan 550 nooc file. Kuwa caadiga ah waxaa ka mid ah
Message ama emails
Top 10 ugu fiican kaararka xusuusta camera
Waxaad ka soo tug ah ama fasax oo aad u baahan tahay kaarka ugu fiican xusuusta, waayo, camera aad u badbaadin oo dhan waqtiyo cajiib ah oo aad qabtay. Halkan waxaa ku qoran liiska oo ka mid ah 10ka ugu wanaagsan kaararka xusuusta camera All ay ka akhrin iyo xawaaraha qortaa labada.
1. ajende Ultimate
2. qayb ultima PRO SDHC
Pro 4. Sandisk ba'an
8. Premium isakoo
> Resource > Camera > Sidee inuu ka soo kabsado Pictures ka Digital Camera Memory Card